Apple mmelite GarageBand maka Mac na nkwado maka Touch Bar na akụkọ ndị ọzọ | Esi m mac
N'ikwekọ ma ọ bụ na ọ bụghị, Apple na-ejikarị ngosi nke ngwa ọhụrụ na ngwanrọ na obere mmelite nke mmemme. Na ngosi nke ihe ọhụrụ 2016 MacBook Pros, Apple gosipụtara ụdị ikpeazụ nke Final Cut na ntọhapụ nke nsụgharị MacOS, a na-etinyekarị iTunes ma ọ bụ Safari mmelite na bandwagon.
Na-eso ọdịnala, taa anyi nwere mmelite ohuru na GarageBand Na oge a, ha anaghị ejedebe na mmezi njehie ahụ. Ugbu a Mmemme Onye Na-agụ Egwú Apple na-akwado Touch Bar ma tinye n'ime nhọrọ ọhụrụ, 3 ọhụụ ọhụrụ na ike iji tinye egwu egwu.
Garadị GarageBand ọhụrụ ka e wuru site na ala iji nweta ọhụụ nke jikọtara ya na atụmatụ ọhụrụ. Ugbu a, ọ dị mfe iji egwu GarageBand mepụta egwu, ọbụlagodi na mgbakwunye nke 3 drums ọhụrụ ahụ. Soundda àgwà mepụtagharị site na ngwa na anyị Mac bụ ahụkebe.
Smart njikwa na-eme ka ọ ọbụna mfe ịchọta na tinye ngwá si ụda n'ọbá akwụkwọ.
GarageBand na-adabere Remote Logic ngwa na- Gwuo ngwa egwu ọ bụla na iPad. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere Macs dị iche iche, dị ka iMac, mana ịchọrọ ịga n'ihu na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọzọ ma ọ bụ n'ụzọ ị na-arụ ọrụ, anyị nwere ike mekọrịta ọrụ anyị mgbe niile maka iCloud.
Na nchịkọta, na ụdị ọhụrụ a nke anyị nwere ike ibudata na njedebe nke isiokwu ahụ, anyị hụrụ:
Ọhụrụ ọhụụ ọhụrụ, imeziwanye ojiji nke ndị na-amalite dị ka ndị ọrụ GarageBand.
Tinye ihe na Aka Bar ndakọrịta.
3 batrị ọhụrụ, na ụdị ọhụrụ.
Nhọrọ iji tinye usoro egwu egwu na-arụ ọrụ na akaghị, iji hazie nke ọ bụla loops n'ụzọ zuru ezu na njikwa ọgụgụ isi.
Enye ohere ibubata egwu ọhụrụ, ọbụna ndị e kere na iPad ma ọ bụ iPhone.
Ruo izu ole na ole, GarageBand dị maka n'efu na Mac App Store.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple mmelite GarageBand maka Mac na Touch Bar nkwado na ozi ọma ọzọ